Tirada Qoys dhan oo Ku Dhintay Madfac AMISOM Ridday oo Ku Habsaday & Inta Ku Dhaawacantay | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Tirada Qoys dhan oo Ku Dhintay Madfac AMISOM Ridday oo Ku Habsaday & Inta Ku Dhaawacantay
Faranga(Hubaal):- Lix Qof oo Hal Qoys ka wada tirsan, ayaa mar qudha wada dhintay, ka dib markii uu Gurigay degganaayeen ku habsaday ama ku dhac Madfac ay rideen Ciidammada Midawga Afrika (AMISOM) ka socda ee Soomaaliya ku sugan.
Qoyskan Masiibada uu ku noqday Madfaca AMISOM, ayaa degganaa Guri ku yaalla Tuulo lagu magacaabo Faranga oo u dhaxysa deegaannada Buufow iyo Jannaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Halka ay Laba Ruux oo kalena ku dhaawacmeen Madfacaas ay Ciidammada Shisheeye Rideen Xalay. Lixda Ruux ee isku Qoyska ahaa ee Madfacaas ku dhintay, ayaa Afar ahaayeen Carruur yaryar iyo laba Ruux oo waawayn, sida uu Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da u sheegay Maanta Guddoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar. Waxaanu intaas ku daray inuu aad u tuhunsan yahay in Madfacaas ay rideen Ciidammo AMISOM ka tirsan oo deegaankaas Saldhig ama Xero ku leh.
“Sax maaha in AMISOM mar kasta oo la soo weerarro ama Qarax lala eegto ay ka aargoostaan dadka rayidka ah. Marar badan ayaannu arrintan kala hadalnay Taliska Amisom iyo dowladda Soomaaliya-ba, laakiin illaa hadda wax ka qabsoomay ma jiraan, markastana dadka shaabka ah inay ka aargoosanayaan bay u muuqataa AMISOM.” Sidaa ayuu yidhi oo uu BBC-da oo aannu Warkan ka soo xigannay u sheegay Guddoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar.
Hase-yeeshee, Ciidammada AMISOM ee halkaas Saldhigga ku leh iyo Taliska guud ee AMISOM ee fadhigiisu yahay Muqdisho midkoodna kama hadal Shacabkan lagu laayey deegaankaas Xalay ee Madfacoodu ku dhacay. Sidoo kale, Xukuumadda Federaalka iyo Madaxda dowladda Soomaaliya, ayaan iyaguna ka hadal dhacdadan.